Uhlelo lokuhlunga oluzenzakalelayo lwezezindlu oluzenzakalelayo lwe-DFM DFG - i-China Backwashing uhlelo lokuzenzakalelayo lokuhlunga lwe-DFM DFG, Factory -Sffiltech
Izindlu zokuhlunga ezigcwele ngokuzenzakalelayo zangaphakathi- i-DFM / DFG
I-DKD, umkhiqizi ohamba phambili wezindlu zokuhlanza izindlu, unochungechunge oluphelele lwemikhiqizo yokuhlunga yokuzihlanza, kukhona uchungechunge oluphathelene nemoto ye-DFX yangaphandle yokushayela; I-DFM motor eshayela i-scraper yangaphakathi; I-DFG pneumatic motor eshayela i-scraper yangaphakathi; ezilungele izikhathi ezahlukahlukene, ezingakwazi ukufezekisa ngokuphelele zonke izinhlobo zokuzihlanza nokuzihlanza kwamakhasimende wezezimboni.
Indawo yokuzihlanza yendawo yokuhlanza (Ukushayela imoto ye-DFM)
Izindlu zokuhlunga ezizihlanza
Ukuhlunga kwendabuko kokuhlunga kwezinto ezibonakalayo nokungcola okuthambile kuzovinjwa kaningi, ngakho-ke kungakhetha kuphela izihlungi ezinkulu noma ukuhlanzwa okuvame ukwenziwa kwemanyuwali, okudinga ukutshalwa kwezimali okukhulu nomsebenzi osindayo, okuholela ekulahlekelweni kwempahla okukhulu. Izindlu zokuhlunga ze-DFM zingaxazululela kalula lolu hlobo lwenkinga ngenqubo yokuzihlanza esezingeni eliphakeme, futhi ihlala igcina isihlungi sihlanzekile, sikhipha imfucumfucu yedoti equkethe ukungcoliswa okuphezulu, futhi inciphise imfucuza yezinto ezibonakalayo; lapho uhlunga amanzi futhi unamathela, i-resin, i-polymer, i-oyili nezinye izinto ezibonakalayo ezinekhwalithi yamanzi engesiyo, kunezinzuzo ezisobala nokusebenza kahle okuphezulu. Ngezinzuzo ezibalulekile zobuchwepheshe nezindleko eziphansi zokusebenza, isihlungi se-DFM singena kancane kancane kusihlungi sendabuko sendabuko ezindaweni eziningi, njengesikrini sokudlidliza, isihlungi sesikhwama, isihlungi sebhasikidi, nezinye izindlu zokuhlunga zohlobo lwendwangu nokunye.
Into yokuhlunga ye-DFM / DFG
Isimiso esisebenzayo se-DFM / DFG
Isimo sokuhlunga sinjani?
Uketshezi lugeleza lusuka kokungena, okungaphakathi okungaphakathi okuvumelanayo okuguquguqukayo okungu-100% okunamathiselwe ngaphezu kwento yokuhlunga, uketshezi lugeleza lusuka ngaphakathi kwangaphakathi kwesihlungi luye ngaphandle, futhi ukungcola kuzobanjiswa ngaphakathi kwangaphakathi noketshezi oluphuma endaweni yokuphuma; njengoba isikhathi siqhubeka, ukungcola kukhula kancane kancane, futhi ingcindezi yokuhlukanisa iyakhuphuka, edinga ukuhlanza into yokuhlunga ngokuya ngengcindezi yokuhlukanisa noma njalo.
Sinjani isimo sokuhlanza?
Isistimu yokushayela yokushayela ye-motor chopper yokuhamba, isebenzisa indlela yokulawula yokushushuluza ukusondela kumingcele yobuchwepheshe boketshezi ukulawula ukuhlanzeka kokuxubha ibhulashi nokuphuma okunengqondo. Izolinganisela ukugqokwa kwesihlungi kanye nokulahleka kokugeleza koketshezi kube ubuncane, okuwukuphela kwesihlungi esisebenzisa lo mklamo wokusungula onelungelo lobunikazi (Patent No. 200820033272.2), lapho ukuguquguquka okuguquguqukayo kokushintshana kwe-helical kususa into yokuhlunga, ukungcola kuzokhiqiza amandla ongezansi we-centrifugal ke zingene emgodini wokuqoqa futhi wamukiswa ngumhloli. Ukuhlanzwa ngakunye kwakhiwa ngokuhlaselwa okuningi, ngemuva kokuhlanzwa kwento yokuhlunga, ikhono lokuhlunga liyatholakala. Lapho uhlanza isihlungi, ukugeleza akufanele kuphazanyiswe.
Khipha kanjani isimo esingcolile?
Ngemuva kwezikhathi ezithile zokujikeleza imijikelezo, ukungcola kuqongelela inani elithile. Uhlelo lokulawula lwe-PLC ngokuzenzakalelayo noma ngesandla luvule i-valve yokukhuculula indle, ukukhipha imfucuza kadoti equkethe ukugcwala okuphezulu kokungcola; Uma kunesidingo, kungabuye kwenziwe kabusha.
Ukususa i-1.Screw, kahle ngokuhlunga i-viscous liquid, susa ukungcola kwe-viscous;
I-2.Structure ilula, kulula ukuyihlukanisa futhi isuse into yokuhlunga, okulula ukuyihlanza;
3.Full ukusebenza okuzenzakalelayo, ukuhlunga okuqhubekayo kwe-inthanethi nokuqeda isisetshenziswa sokuhlunga esindayo nomsebenzi wokuhlanza;
I-4.Cost yokuvikelwa kwezinto ezibonakalayo nezemvelo, hhayi okuvelayo okutholakalayo.
5.Efakwe ngokuqonda okuphezulu kwesihlungi sici sokuhlangabezana nazo zonke izinhlobo zezidingo zokuhlunga;
I-6.Ukulahleka kwengcindezi yokucindezela kuncane kakhulu, izinga lokugeleza lizinzile, ukusetshenziswa kwamandla kugcinwa, futhi inqubo iqinile;
Isihluzi esivelisiwe ukuvimba ukuvuza kwezinto eziyingozi, kufanelekile ekukhiqizweni okuphephile nasempilweni yabasebenzi;
I-8.Ukuqhekeka koketshezi lokudoti kuphezulu, futhi imfucuza ingaphinde iphinde isebenze, futhi ukulahleka kwezinto zenani eliphakeme kuyancishiswa;
Izinhlelo ze-9.Optional control advanced advanced, ezinamandla, ezisebenza kahle, ukuthembeka okuphezulu;
10.Selection yemikhiqizo eyaziwayo yomhlaba yezakhi, ukuthembeka okuphezulu, izindleko eziphansi zokusebenza;
11.Standard inqubo inqubo yezimboni ilawula i-DCS interface, ukubonwa okukude nokulawulwa kungafinyeleleka;
I-12.Motor, i-pneumatic motor ikhethwa ngokuya ngemvelo.